Ogaden News Agency (ONA) – Tirada Dadka Ku Dhintay Weerarkii Istanbuul oo sii Kordhaysa.
Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka waxaa weerarkii habeen hore ku dhimatay ugu yaraan 39 qof oo ay ku jiraan 15 ajaanib, weerarkan oo lagu qaaday goob habeenkii lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Turkiga.
Nin hubaysan ayaa saqdii dhexe ee waqtiga Turkiga waxa uu rasaas ku furay goobta habeenkii lagu caweeyo ee Reina, xilli dadkii halkaa ku sugnaa ay u dabaaldegayeen sanadka cusub. Suleymaan Soylu ayaa sheegay in weli ay socdaan dadaalada lagu baadi goobayo qofka weerarka gaystay, kaasi oo loo malaynayo inuu kaligii weerarka fuliyay.
Wararku waxay intaas ku darayaan in ugu yaraan 69 qof oo kale ayagana lagu dabiibay isbitaalka, wasiirka ayaa intaa sii raaciyay. Afar qof ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin xaalado halis ah. Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in dadka weerarka soo qaaday ay isku dayayeen inay “qalalaase abuuraan” waxa uuna wacad ku maray inuu “joojin doonin dagaalka” ka dhanka ah argagixisada “ilaa uu ka tirtiro”.
Mr Soylu oo la hadlayay weriyayaasha ayaa sheegay: “Waxaa soconaya baadi goobka qofka argagixisada ah. Booliska ayaa wada howlgallo. Waxaannu rajaynaynaa in qofka weerrarka qaaday mar dhaw la soo qaban doono, Ilaa iyo haatan 21 mayd oo kaliya ayaa la aqoonsaday.” ayuu yidhi Suleymaan Soylu.
15 ama 16 ayuu sheegay in ay ajaanib ahaayeen, halka ugu yaraan 3 qof oo Turki ah oo ka mid ah dadka dhintay ay suuragal tahay inay ka shaqeynayeen kalaabkaas. “Kani waxa uu ahaa xasuuq, oo loo fuliyay si arxan darro ah,” ayuu raaciyay Mr. Soylu.